Nisesy ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny mpitondra môtô tato ho ato izay teto an-tampon-tanànan’Antsiranana ary nahitana izay namoizana mpitondra môtô teo no ho eo. 7 janvier 2021
Araka izany dia nanao fanambaràna ny avy eo anivon’ny Polisim-pirenena aty an-toerana, nampitandrina ireo mpitondra môtô amin’ny fandehanana mafy.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitry ny Polisy aty Antsiranana dia ahitana andiana tanora vitsivitsy eto an-toerana manana fihetsika amin’ny fandehanana mafy rehefa mitondra môtô eto an-tampon-tanàna. Efa fantatra ireto farany ka tokony hitandrina mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Araka izany dia handray fepetra ny Polisy manoloana izany raha mbola hitohy.
Ankoatra izany dia mpitondra môtô iray 32 taona no tapa-tongotra raha nifandona tamin’ny bajaj iray, ny alatsinainy teo, mbola taty Antsiranana ihany no nisehoan’ny tranga. Araka ny fitantaran’ireo nanatri-maso dia samy nandeha mafy ny an-daniny sy an-kilany ary tsy nisy nifandefitra. Tao amin’ny lalana Ambalavola no nisehoan’izany.
Tsikaritra araka izany fa mateti-pitranga ny lozam-pifamoivoizana ateraky mpitondra ny bajaj sy môtô aty Antsiranana. Ankoatra ny fandehanana mafy dia ny tsy fanajana fijanonana amin’ireo lalana tsy ahitana takelaka manamarika izany no mahatonga ny loza, indrindra koa ny tsy fananana fandeferana amin’ny samy mpamily.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2023) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (205) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021